अफगानिस्तान छाडेर भाग्दा राष्ट्रपति घनीले के के लगेका थिए ? आधा पैसा हेलिकप्टरमा नअटे पछि हेलिप्याडमै छोडेका थिए « Gaunbeshi
अफगानिस्तान छाडेर भाग्दा राष्ट्रपति घनीले के के लगेका थिए ? आधा पैसा हेलिकप्टरमा नअटे पछि हेलिप्याडमै छोडेका थिए
एजेन्सी । अफगानिस्तानमा तालिवानले मुलुक कब्जामा लिएपछि राष्ट्रपति अशरफ घनी देश छोडेर भागेका छन् । अफगानिस्तानबाट भागेका राष्ट्रपति अशरफ घनीलाई ठूलो झड्का लाग्यो जब ताजिकिस्तानले आफ्नो विमानलाई उसको भूमिमा अवतरण गर्न दिएन।
बाध्यतामा उनी ओमान मा बस्न बाध्य भए। पछिल्लो जानकारी अनुसार अब उनी ओमान बाट अमेरिका को लागी पनि जान सक्छन्। अशरफ घनी बाहेक अफगानिस्तानका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार मोहिब पनि ओमानमा छन्। दुबै विमानलाई आइतबार ताजिकिस्तानमा अवतरण गर्न दिइएन।
काबुल स्थित रूसको दूतावासले अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ घनी को बारे मा एक ठूलो खुलासा गरेको छ। रसियाको आरआईए समाचार एजेन्सीले सोमबार आफ्नो दूतावासलाई उद्धृत गर्दै भन्यो कि घानीले देश छोडेर भाग्दा चार कार र एक हेलिकप्टर नगद सहित लिएका थिए।
रकम यति धेरै थियो कि जब हेलिकप्टरमा अटाएन त्यो उनले हेलिप्याडमा नै छोडिदिए। यसअघि तालिबानले काबुल विमानस्थलमा धेरै नगद भेटिएको दाबी गरेको थियो। काबुल विमानस्थलमा मानिसहरुका बीचमा डर स्पष्ट देखिएको छ। जनता जसरी भएपनि देश छोड्न चाहन्छन्। यसका लागि उसले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भईरहेको एक भिडियोमा, केहि मानिसहरु रनवे मा एक चलिरहेको विमान को बाहिरी भाग मा बसेको देखीन्छ। एकै समयमा, अर्को घटना मा, तीन अफगान नागरिकहरु एक अमेरिकी सैन्य विमान को टायर को बीच उभिए। तर जब विमान उड्यो, तीनै जना एक एक गरी खसे।